UniProyecta -Imfundo yayo yonke iminyaka
Iincwadi zeTestamente eNtsha zeBhayibhile
Molo mfundi othandekayo, siyakwamkela UniProyecta. Apha sicinga ukuba imfundo nenkcubeko kufuneka simahla kubo bonke abantu, indoda okanye umfazi, umntwana okanye umntu omdala. Ke ngoko, kweli phepha uza kufumana ifayile ye- ulwazi ebesiqulunqa ngohlobo lwamanqaku ukukunceda kuqeqesho lwakho. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungayifumana njani into oyikhangelayo, siza kukunceda ngesishwankathelo esifutshane sento oza kuyifumana kule ndawo.
Olunye lwamandla ethu lulwimi lwesiFrentshi, esilufundileyo enkosi kwiincwadi kunye nohambo lokuya kulo IFransi neCanada. Kweli candelo sifundisa izifundo kuwo onke amanqanaba: ukusuka kwabaqalayo ukuya kwezona zihambele phambili.
Iinyanga zonyaka ngesiFrentshi
Izibhengezo zesiFrentshi: zithini?
Iiyure ngesiFrentshi: uzithetha njani?
Amanani esiFrentshi ukusuka ku-1 ukuya ku-1000
Izenzi zesiFrentshi: uluhlu, umthambo kunye nokudibanisa
Izihlanganisi zaseFrance: uluhlu kunye nemizekelo
Oonobumba besiFrentshi kunye nokubizwa kwayo
Namhlanje akunakwenzeka ukuba ungadingi ulwazi lwesiNgesi. Kwi umabonwakude, iinethiwekhi zentlalo kunye nemidlalo yevidiyo uya kufumana amacandelo okanye amagama athathwe kwisiNgesi. Ke ngoko, siwalungiselele la manqaku kufunda isiNgesi kwaye uphucule inqanaba lakho.
Iintsuku zeveki ngesingesi
Amabinzana othando ngesiNgesi
Iinyanga zonyaka ngesiNgesi
Amanani esiNgesi ukusuka ku-1 ukuya ku-1000
IiVowels ngesiNgesi: Ifonetiki kunye nokubizwa
Izichazi zokuchaza umntu ngesiNgesi
Ngokwendalo, ayizizo zonke isiNgesi okanye isiFrentshi, zininzi ezinye iilwimi ezintle kwaye eziluncedo ekufundeni. IsiRashiya, isiTshayina, isiJapan okanye isiTaliyane yimizekelo nje yoko sikulungisileyo.
Amanani aseJamani ukusuka ku-1 ukuya ku-1000
Amanani esi-Arabhu ukusuka ku-1 ukuya ku-1000
Amanani ngesiBasque ukusuka kwi-1 ukuya kwi-100
Izenzi zeCatalan: uluhlu kunye nokudibanisa
Izihlanganisi zaseJamani: uluhlu kunye nemizekelo
Izibizo kwi-Portuguese: ukubiza kunye nemizekelo
Amanani aseRussia kunye nokubiza
Amanani amaTshayina ukusuka kwi-1 ukuya kwi-100
Amanani ngesiPhuthukezi ukusuka kwi-1 ukuya kwi-100
Amanani aseJapan ukusuka ku-1 ukuya ku-50
Amanani ase-Italiya ukusuka kwi-1 ukuya kwi-100
Ngoku sijikela kwicandelo lenkcubeko, ngakumbi siza kuphinda siqwalasele imvelaphi yethu, iGrisi yakudala. Akukho nto ilunge ngaphezu kwebali elilungileyo loothixo namajoni okucoca ingqondo kunye nokufunda nookhokho bethu.
Intsomi ka-Achilles kunye nesithende sakhe
Intsomi ye-Prometheus kunye nePandora
Iintsomi zamaGrike zaBantwana
Kwaye okokugqibela, kolu luhlu sibandakanya yonke into engenandawo kwicandelo elithile.
Amanani aphambili ukusuka kwi-1 ukuya kwi-10.000
Amanani ase-Egypt ukusuka kwi-1 ukuya kwi-100
Ezona zixeko zili-15 zinabemi abaninzi eSpain
Imithandazo yesithandwa ihambile
Amanani amaRoma ukusuka ku-1 ukuya ku-1000
Izikhundla zomkhosi wase-US
Amanani kaMayan ukusuka ku-1 ukuya ku-1000
Amanani e-Aymara ukusuka kwi-1 ukuya kwi-100
Amanani aseGuarani ukusuka kwi-1 ukuya kwi-100
Kwaye konke oko! Siyathemba ukuba uyakonwabela ukuhlala kwakho e UniProyecta Kwaye khumbula ukuba ukuba unemibuzo okanye iingxaki ungaqhagamshelana nathi usebenzisa ifom yoqhakamshelwano okanye kwicandelo lamagqabantshintshi ekupheleni kwesifundo ngasinye. Ndiyabulisa, netizen!
UniProyecta inga i-yakho inkcubeko nenkcubeko yemfundo isimahla kwi-intanethi. Funda iilwimi kwaye wanelise umdla wakho wokufuna ukwazi ngamanqaku akho kunye nezifundo.